Loogu talo galay ganacsatada | Shuraako
Loogu talo galay ganacsatada
Shuraako waxay aaminsan tahay aragtida ama fikradda ah: in maamul wanaag lagu gaadhi karo nabad. Qaybta dhaqaalaha gaarka loo leeyahay oo is xilqaantaa waxay abuurtaa ganacsi si joogta ah u kora oo isla markaana kordhiya ka qaybgalka arrimaha bulshada iyo deegaanka. Tani waxay abuurtaa xidhiidho wax is waydaarsi shaqo oo la mahadiyo isla markaana waxay soo kordhisaa barwaaqo iyo degenaasho. Anagoo kaashanayna dhaqdhaqaaqayaga aan faa’iido doonka ahayn, Shuraako waxay xoojinaysaa xidhiidhada ka dhexeeya dhaqdhaqaayada ganacsiga iyo lacagta maalgelinta, dhiirigelinaysaana kobcinta dhaqaalaha oo keenaya nabad.
Dhaqdhaqaadyada dhaqaale ee aadka u yaryar, kuwa yaryar, iyo kuwa meeldhexaadk ah [MSME] ayaa u badan shaqooyinka dalalka tamarta daran laga qabto; dhibaatada ugu wayn ee ka horjoogta horumarkuna waa la’aanta hanti dhaqaale oo haboon oo la helo marka loo baahdo. In kastoo dalalka tamarta daran ay ka jiraan fursado korodh dhaqaale, badanaa waa la iska indho tiraa iyadoon loo badheedhi karayn biimaha ku jira iyo awood yarida heyadaha. Marka la helo lana arko muuqaalka guud ee [MSME], Shuraako waxay daaha ka qaadaa fursado xiiso gaar leh una gudbisaa maalgashadeyaasha si ay u kobciyaan ganacsiga shaqooyinna u abuuraan.
Shuraako waxay heshaa ama gees u saartaa ganacsiga ama unugyada dhakhso wax ugu soo kordhiya dhaqaalaha, iyadoo hubinaysa inay sidii loo baahnaa hoosta uga dhismaan isla markaana samaysa xidhiidhyada adag ee salka u ah maalgashi lagu guuleysto. Shuraako si haboon ayey isugu beegtaa maalgashiga dhaqaale iyo ganacsiga Soomaaliyeed, waxayna maaraysaa hawlaha fulineed maalgelinta kadib. Si kale haddii loo dhigo, Shuraako waxay u fidisaa adeeg lagama maarmaan ah ganacsatada deegaanka iyadoo muujinaysa in maalgashi joogto ah lagu samaynkaro Soomaaliya iyo in uu jiro rabitaan soo dhawyn leh oo lo hayo in si xilkasnimo leh dayn looga qaadan karo Soomaaliya.